Andy, malagasy tia boky: « Iriako tsy hiala ato amiko ny fitiavana mamaky boky » - Book News Madagascar
Andy sy ny tontolon’ny famakiana boky
Izy no Rakotobe Mihajatiana Andy. Tovolahy 19 taona, anisan’ny mpankafy mahafatra-po ilay olo-malaza vahiny Selena Gomez. Toy ny ankamaroan’ny tanora amin’izao, tsy mba tao anatiny mihitsy ny fitiavana mamaky boky.
« Tena farak’izay tsy tia mamaky boky mihitsy aho taloha ary rehefa mahita olona mamaky boky ary aho dia tena mihomehy foana », hoy i Andy.
Hafa mihitsy ny zavatra tiany sy mahavariana, mijery irony horonan-tsary vahiny irony toy ny : Pretty little Liars, Cinquante Nuances de Grey, sns, ary koa ny mozika.
Rakotobe Mihajatiana Andy, mpankafy mahafatra-po an’ilay mpanakanto malaza Selena Gomez. cc: Andy
Ny tena ahafantarana hoe tena tiana ny zavatra iray dia rehefa manao izay zavatra rehetra ianao hahazoana azy. Toy izany no nataon’i Andy. Rehefa nentin’ny namany teny amin’ny fivarotam-boky iray izy dia tsy nisy nahaliana azy ny boky izay hitany tamin’ny voalohany, fa rehefa nijerijery teo dia tojo tamin’ilay tiany ihany izy.
« Nijery ireo boky aho dia tena tsy nisy nahasarika ny masoko mihitsy. Fa rehefa nijery teo foana dia nahita ilay boky Gossip Girl aho, ilay « série TV » tena ankafiziko. Efa fantatro hoe boky no niandohan’ilay horonan-tsary fa tsy nampoiziko hoe hisy an’ilay izy aty Madagasikara ka dia novidiako ilay Tome 1 », hoy ihany izy nitantara.
Nanomboka teo dia tsy tana intsony fa lasa nitsiry tsikelikely tao aminy ilay fitiavana mamaky boky.
« Tena lasa namaky boky foana aho isak’izay mahatsiaro, ary roa herinandro dia vitako ilay Tome 1 », hoy izy.
Tafiditra tanteraka tao anatin’ny tontolon’ny famakiana boky izy ary toy ny olona rehetra rehefa tena tia sy liana amina zavatra iray, dia nahafoy vola sy fotoana maro izy, ividianana boky maro isan-karazany.
Nanova fiainana ny famakiana boky
Nahita ilay boky « Gossip Girl » i Andy. Gossip Girl, izay anisan’ny sarimihetsika ankafiziny indrindra. cc: Andy
Raha ilay Andy tsy tia ary mihomehy olona mamaky boky ireny no nisy taloha dia tsy toy izany intsony izy ankehitriny. Variana tamin’ny karazana teknolojia be dia be izy taloha ary ny hakamoana, izay tena anisan’ny olana tena tsy mampivoatra ny tanora ankehitriny, no tena namatotra azy.
« Mampazoto ! Ary tena mampilamin-tsaina sy manala sorisory ny famakiana boky. Rehefa tezitezitra aho dia mamaky boky, tonga dia lasa maivamaivana, lasa milamindamina ny fiainako ary hitako lasa nazotozoto mihitsy aho », hoy i Andy.
Hitany tao anatin’izany fa hafa tokoa ilay horonan-tsary tena ankafiziny rehefa novakiany tao anaty boky : feno sy mazava tsara; hany ka sady afaka nanaraka ny zavatra tiany izy no sady mampitombo fahalalàna amin’ny alalan’ny famakiana boky.
« Rehefa nandinika aho dia ny boky niaingan’ireo horonantsary tiako no tena mahaliana ahy », hoy ihany izy.
Mampalahelo satria dia an-kavitsiana ny tanora Malagasy mamaky boky ankehitriny nefa dia tena ilaina na eo amin’ny fianarana, fahalalàna ankapobeny ary indrindra ny famolavolana ny toe-tsaina mba ho tonga olom-banona.Tsy ratsy ny fampiasana karazana teknolojia isan-karazany nefa dia miteraka hakamoana satria lasa tsy mikaroka ny olona fa miandry valiny fotsiny.
Toa an’i Andy, tsara raha avela hisafidy izay boky tiany sy mahaliana azy ireo tanora sy ankizy. Atao mifandray amin’ny zavatra tiany : mozika, siansa, sary miaina sns… Mitsiry ho azy tsikelikely ao aminy, toy ny an’i Andy ny fitiavana mamaky boky rehefa entina amin’izay foana dieny mbola kely.
Hisy foana ny hiteny hoe « Tsy manam-potoana hamakiana boky izany izahay, ny internet manome toky » ! Marina izany ! Nefa hafa ihany ilay hoe nikaroka mihitsy ny saina dia avy eo mahazo fahalalàna. Tsarovy fa anisan’ny tena mampandroso ary reharehan’ny firenena iray ny fananana tanora tia mamaky boky.
Publié dans Citoyens, Jeunesse, Malagasy et Portrait